New fahafahana ho nanamafy namana 7/12! | Holmbygden.se
New fahafahana ho nanamafy namana 7/12!
Posted on 27 Novambra, 2015 ny Holmbygden.se
OBS! Hampandre ny fiaraha-miory thomas.aslin@sundsvall.se
(raha mbola tsy nanao izany tamin'ny alalan'ny HBU)
Makà vintana ny Alatsinainy amin'ny. 18 (toerana tokony nanambara taty aoriana) handeha fiofanana mba ho tonga antsoina hoe hanamafisana namany. Rehefa vita ny fiofanana, dia afaka amin'ny loza in Holm mandray ny SMS SOS mivantana avy amin'ny mpandraharaha. Tsy manana adidy manokana na eo amin'ny zo sy ity, fa raha afaka ary manampy! Izay raha ny marina dia afaka hahatonga ny fiovana ao amin'ny havanao na, namana na olon-kafa teo akaiky teo ho tafavoaka velona!
Hatramin'ny fanombohan'ny ny tetikasa 2013 dia efa 11 fanairana in Holm ary saika ny rehetra anefa no efa mpiasa an-tsitrapo teo anoloan'ny fiara mpitondra marary sy ny asa vonjy taitra. Na izany aza, isika dia tokony ho Holm bebe kokoa amin'ny distrika, ary kely kokoa amin'ny fampielezana manodidina Holmsjön. Ao amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia toy izany. tsy misy olona eo amin'ny lafiny atsimo Holmsjön na Vike, Loviken, Sandnäset, Kväcklingen, Österström sy ny fanirian. Fantatrao ve olon-kafa araka ny eritreritrao mety ho liana sy mety. Lazao azy ireo!
Ny fiofanana dia nokarakarain'ny Medelpads Rescue Association ary maimaim-poana. Holm, niaraka tamin'ny vitsivitsy toerana hafa ao Medelpad irery any Soeda izay mety ho nanaitra avy hatrany toy izany amin'ny loza samy hafa.
fiofanana dia ahitana:
Handevonana ny fifamoivoizana loza
Heart- & Resuscitation amin'ny AED
Matetika zava-dehibe ny asa tsotra – ny zava-dehibe indrindra dia atao haingana. Izany no mahatonga ny rafitra tena zava-dehibe tsara Holm p.g.a. fa amin'ny loza matetika ny momba ny. 20-60 minitra avy amin'ny fiara mpamonjy voina akaiky indrindra sy ny asa famonjena.
FANTATRAO VE Holm manana ny Defibrillators!?
Vakio bebe kokoa ka jereo ny tantara tamin'ny namany nanamafy tsy tamin'ny holmbygden.se/akut (hita mora foana amin'ny alalan'ny “ ” tao an-tampon-trano pejy).
K ontact amin'ny fanontaniana:
Thomas Åslin, Fire Inspektora / Inner Chain
Vakio bebe kokoa momba ny tetikasa (en. 2012), CLICK HERE.Close.
Ny olona any ambanivohitra dia tsy azo tonga mitovy lenta ny fiarovana hamely loza toy ny olona ao amin'ny tanàn-dehibe. Ny kaominina ny olom-pirenena dia tokony hanana "mitovy fiarovana" manohitra ny loza sy tetikasa ity mikasa ny hahatratra izany tanjona tsara kokoa.
Faritra ambanivohitra no tsy voaro ny loza noho ny tanàn-dehibe izay lehibe- sy ny hery vonjy taitra monina any amin'ny faritra ambony mponina. Raha tsy misy fisorohana sy manome fahafahana bebe kokoa fiarahamonim-pirenena ny fahafahana voalohany Bet tsy mba tonga ampahany amin'ny Act amin'ny Fisorohana ny loza.
Fiarovana tsara kokoa manohitra ny loza any ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanohanana ny olona.
Ampitomboy ny foto-kevitra ho an'ny fiarovana manohitra loza in ambanivohitra. Ny foto-kevitra miorina amin'ny fahafantarana ny tena loza any ambanivohitra mahamenatra sy fepetra (torohevitra, vaovao, ny fanaraha-maso sns) mba hampihenana sy mitantana ireo. Ny ankehitriny hevitra hevitra for Management MRF amin'ny Oktobra 2012.
Fikarohana fantsona amin 'izany ny fanabeazana sy fanazavana azo miasa amin'ny fomba, ary amin'ny alalan'ny mahita ireo olona izay te ho eo an-toerana "fiarovana ny olona" (Diniho ny anarana ho an'ireo olona). Ny isa dia miankina amin'ny olona liana sy ny haben'ny ny fiaraha-monina
Nandritra Oktobra-Desambra 2012, mampihatra mpanamory eo amin'ny foto-kevitra ny kely indrindra 3-5 vondrom-piarahamonina ao amin'ny tanàn-dehibe any ambanivohitra.
Janoary-Febroary 2013, handinika ny tetikasa sy ny fahafahana hanana ny asany ho ao an maharitra dingan'ny ny MRF sy ny FIP avy monisipaly mpiara-miasa dia afaka mameno fiarovana manohitra ny loza. Ny fanombanana dia tokony ahitana ihany koa ny mety hisian'ny fanairana SMS na ny tahaka izay azo nalefa tany amin'ny "fiarovana ny olona" ary koa izay ahafahana mampahafantatra amin'ny toerana maromaro taorian'ny efa nifanarahana fepetra takiana (oh 30 Ny fandraisana anjara any amin'ny afo ao an-toerana service). Ny asa dia natambatra ao amin'ny tatitra ary nampiseho ny fitantanana ekipa MRF tamin'ny Febroary 2013.